PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Abasemozambique kweyasechibini
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Izindaba - ZAKHELE MCHUNU
BEYIZINYAZISWE nayizihambeli zasemozambique inkonzo enkulu yereformed St John’s Apostolic Faith Mission ethathe isonto lonke yasongwa ngesonto eledlule ngaphansi kwesekethe laleli bandla elisemthwalume, emzumbe.
Inkonzo yaleli bandla ibibusiswe wukuhanjelwa okokuqala ngqa yisekethe lasemozambique eliholwa ngumfundisi uhenry Thobela ogqugquzele amakholwa ukuba aphile impilo ehlanzekile futhi azithobe lapho ehamba khona.
Uthe amakholwa ayaye angakuqondi ukuthi kudalwa yini ukuba angaphumeleli empilweni ekubeni ehlala esendlini yesonto.
Uthe kunabamangazwa wukuthi kunabantu abafika kanye enkonzweni, bacele ukuthandaziswa ezinkingeni zabo, maqede izicelo zabo zifezeke.
Uxwayise ngokuthi ngeke uzithole izibusiso uma sekufana nakini enkonzweni, lapho uzenzela khona umathanda wakho.
“Kumele nizithobe, nizithibe kulokho okungamele nikwenze, inhlonipho ihamba phambili uma ulikholwa ukuze uzokuba yisibonelo esihle nasemphakathini kanjalo nenhlanzeko. Abasunguli baleli bandla babeyikhuthaza kakhulu inhlanzeko endleleni umuntu aphila ngayo,” kushumayela umfundisi uthobela.
Umfundisi uthobela bekuthi uma abasemozambique beqala amaculo ngolwimi lwabo, abamise, ahumushe ngesizulu ukuthi lelo culo lithini, bese ibandla selilandela, liqonda ukuthi kuculwa ngani.
“Kukhona amakholwa angenandaba (nokuba sendlini yesonto), asabuka izinto ngeso lenyama. Yingakho-ke nje kufika phambi kwenu abantu abasuke bezocela ngokujulile ukuthandaziswa maqede iphenduleke ngokushesha ngoba basuke beza ngenhlonipho nokukhulu ukuzithoba.
“Kuyingozi ukujwayela endaweni, ngisho emisebenzini imbala kuba yinkinga (uma sewujwayele kakhulu),” kusho umfundisi uthobela.
Le nkonzo beyibusiswe nawukuhanjelwa ngu-archbishop Petros Chauke ozinze enorth West kanjalo nenhloko yaleli bandla elinekomkhulu Kwamashu, u-archbishop Robert Mbotho, okunguyena oyivale ngomkhuleko sekuyobusiswa amanzi amakholwa abefike ngobuningi.
U-archbishop Chauke unxuse amakholwa ukuba akhulekise abaholi ngoba baphathiswe umsebenzi onzima, wokwelusa ibandla.
“Ngithinteke kakhulu ngesikha- thi ubishop (Zakhele) Khwela (ophethe isekethe lasemthwalume) ekhuluma ngobunzima adlule kubona njengoba sekukuhle kunje namuhla. Wahlupheka ukuze kusizakale mina nawe.
“Ngiyazibuza ukuthi ngabe sikhona yini lapha ukuba unkulunkulu akazange aqale ngokumshaya, emqinisa. Silapha ngenxa yokudlula kwakhe kuzo zonke izimo ezinzima abhekane nazo,” kusho u-archbishop Chauke.
Ubishop Khwela ubonge wonke amakholwa ngokudela konke ahambele le nkonzo, wawafisela uhambo oluhle, oluphephile esebuyela ezindaweni azinze kuzona.
IZITHOMBE NGU: ZAKHELE MCHUNU
INKONZO yasechibini isuke ingaphelele uma ingavulwanga yaphinde yavalwa yi-brass band.
U-ARCHBISHOP Chauke wasenorth West (kwesobunxele) no-archbishop Mbotho, oyinhloko yereformed St Johns, behola ababhishobhi sekuvalwa inkonzo ngomkhuleko.